JINGHPAW KASA: ပြည်သူ့စစ်များ ဗမာစစ်တပ်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ ရှမ်းပြည်အခြေစိုက် တပ်မဟာ (၄) လက်အောက်၊ ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃၆) နယ်မြေဖြစ်သော ဘန်ဆိုင်း ဒေသ ဒွမ်အော် ဘက်သို့ ထိုးစစ်ဆင်လာသော ဗမာစစ်တပ် ခလရ (၂၄၂) ကို ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၃၆) မှ မျိုးချစ် ပြည်သူ့စစ်ရဲဘော်များ ဇန်န၀ါရီ (၂၇) မနက်ပိုင်း (၁၀း၀၀) နာရီခန့်တွင် ဆီးကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ တိုက်ပွဲတွင် ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ (၃) ဦး သေဆုံးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Burmese soldiers were killed near Ban Sai and Dum Aw region, KIA (36th) battalion which is under KIA (4th) Brigade area, Northern Shan State on 27th January according to KIA front line officer report. Burmese government army infantry unit (242) made offensive action to KIA controlled area, thus KIA patriotic soldiers fought to defend their regions.
Thein Myint said...